Robots lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Free Game Robots afaka manolo tena kilalao lafo vidy. Raha te-hahazo vaovao modely ny iray amin'ireo mpiady vy, ray aman-dreny fa tsy manam-bola eo amboniny, dia tsy ratsy noho milalao aminy amin'ny aterineto. Ary tsy mila sary an-tsaina ny fanafihana, satria ao amin'ny tontolo virtoaly ny milina dia hiatrika fahavalo maro mba hiarovana ny tanàna amin'ny fanafihana sy nameno ny fitaovam-piadiana ny fitaovam-piadiana ny vaovao tonga lafatra. Hanana milina mihoatra ny iray, betsaka araka izay afaka mitantana. Dia azo nangonina avy amin'ny mpamorona mba hanangona piozila amin'izy ireo, na nandoko eo amin'ny sary, tadiavo ny fahasamihafana sy ny mpivady.
Manomboka basy maniac
Manangana ny robot
Maherifo mifandona amin'ny volana
Ny mpikambana rôbô Boom Bang
PAW Patrol Sambory io Robot io
Baze sy ny milina mistera Robot mpitaingina mianatra mandidy
Super Mitolona Robots Defense
Mahafaty Foko Droid
Jigsaw robots vy
Afrikana mpiady amin'ny alàlan'ny Alien
Tsindrio Tap Robot
R. O. B. O. Y. Memory
Saribao Robot Jigsaw
Mijaly hatramin'ny fahafatesana
Ody ankizivavy: Vonjeo ny sekoly
Blaze sy ilay mpamorona Robot Machines Monster
Alefaso ny Robot Gun
Fomba fiaramanidina fanidina
Ny tena dokotera Robot biby fanavotana
Lalao Robots tamin'ny Category:
Farany Robots lalao
Mandehana ry Titans tanora! Fanafihana honahona
Robots Vs Bugs
Amboary ny Boss
Lalao Online Rehetra Robots lalao an-tserasera
ny ho avy – ny teknolojia avo
ny olombelona nitady foana handroso sy namorona ny rafitra mba hanamora ny olona ho amin'ny asa sy ny fiainana andavanandro. Raha niresaka ny milina, isika, dia tonga dia hanolotra ny zavaboary olombelona mitovy sy omena faharanitan-tsaina. Ity sary napetraky ny siansa sy ny sinema noforonina vita an-tsoratra, ary efa nahavita hamaka ao an-tsaintsika, fa raha ny tena marina dia ahitana milina misy milina, ho azy ny fiara na ny milina ho amin'ny fanamboarana ny misy vokatra. Na dia ny solosaina – izany ihany koa ny milina, na dia tsy mitovy amin'ny rehetra ny Android Star Wars avy.
rafitra tsirairay dia Maty raha tsy baikoina na mihazakazaka. Na inona na inona fahaizana artifisialy ny manan-tsaina, dia mbola mila fanampiana olombelona. Iray mila izany, ny hafa tsy dia, fa izy ireo zavaboarin'i ny olombelona rehetra tanana. Mety tonga ny fotoana milina dia ho afaka hilalao amin'ny ny ka hijery, izay tsy azo avahana amin'ny olombelona. Fa aoka isika manantena fa mbola lavitra, sy ny toy izany dia ho afa-tsy ny pejy ny siansa tantara foronina tantara foronina, sarimihetsika, ary ho hita ihany mandritra ny lalao an-tserasera robot. Raha tsy izany, ny sivilizasiona niteraka no miandry ny unenviable avy.
Fa aza avela ny vaovao ratsy, satria izao no fotoana mba hiala voly sy mba ho hitan'ny mpahay siansa. Ato amin'ity fizarana ity ianao dia afaka miteny miaraka amin'ny robot samy hafa fiaviana, kilasy sy ny toerana. Miady milina manohitra ny mponina tao an-tanàna, ary dia tsy ho mora ny hiatrika ny fandringanana. Fa angamba ny zavatra tsy mba toy izany ratsy ary manana mpiara-vy. Omeo azy mandrindra sy handahatra manodidina ny paritra mba hisorohana ny mpanao herisetra ao an-nitoetra.
Ao amin'ny lalao Machinarium mpanoratra Jakub Dvorsky namorona planeta iray manontolo ny milina, izay velona, ​​niasa, nandeha, niady heloka bevava. Yakub namorona izao rehetra izao, izay tsy misy toerana tsara tarehy mahazatra ho antsika, ary manodidina mamelatra mekanika Valley, mponina ny robot.
Games Robots dia feno tsy ampoizina
Ny isan-karazany ny lalao no tena mahavariana:
Ao amin'ny lalao azo nivory milina amin'ny piesy tenanao, raha hitanao ny ilaina antsipirihany. Mampiseho fandinihana mba hahita, mampifandray izay tsy nahita, ary izany no asan'ny Ilay Namorona Azy, satria ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ho ao amin'ny fitoerana tsara, raha tsy izany dia tsy ny rafitra miasa sy lavo ankoatra tamin'ny voalohany vao nanomboka ny fitsarana. &Nbsp;
Misy lalao ho an'ny ankizilahy milina nametraka ny mpilalao tao anatin'ny mafy indrindra ny toe-piainana. Ny izao tontolo izao dia nifarana, ary niezaka ho tafavoaka velona cyborgs vitsy monja. Izy ireo manompo tsy misy, manova ny faritra efa tonta sy ny fanavaozana ny maotera menaka. Afaka manisa ny tenany ihany, saingy tena sarotra, rehefa tsy manana tongotra. Tany very tany amin'ny Apokalypsy, ary miatrika ny efa ratsy be ianao dia tsy maintsy velona milina misy fomba.
Indray mandeha koa, eto an-tany dia nanafika ny vahiny sy milina fitaovam-piadiana nanafika ny tsy fantatra. Dia toa Raha vao jerena fiantraikany – izay afaka ho tonga mafy fo fefy vy? Fa raha mihinana, misy herinaratra marary mitsika, immobilizes ety an-robot. Isaorana Andriamanitra fa ny mpahay siansa marani-tsaina mamorona fitaovam-piadiana ampy, mahasakana toerana. Famatsiana fitaovam-piadiana azy ireo androids, dia nametra-fanantenany eo amin'ny fahaizany mamikitra sy ny tolona fahaiza-manao. Amin'ny alalan'ny fifehezana ny vy miaramila, miezaka ny tsy nifandray tamin'ny fitondran-tena mikendry blisters sy afo eo amin'ny fahavalo. &Nbsp;
koa, lalao an-tserasera milina manolotra ny piozila mba hahita ny ady nahavariana sary sy ny Refaita teo izay mety ho voninahiny. Fandokoana ihany koa vonona mahaliana fanoharana sy ianao ihany no hametraka ady miaramila loko mba hamelona indray robot, ary dia nandefa azy handeha ho any amin'ny fampielezan-kevitra ara-miaramila. Ny fitadiavana ny mihoatra, no manamarina ny sary sy hiverina any am-boalohany ny bika aman'endriny. &Nbsp;